Le Barcarès: Les Voiles Blanches, nzvimbo yezvokudya-dziva-dziva reMarina, yakapisa usiku, mutsotsi wechikwata chaifungidzirwa - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU »Le Barcarès: Les Voiles Blanches, nzvimbo yezvokudya-dziva-dziva reMarina, yakapisa usiku, mutsotsi wechipfuva wakatarwa
ZVIMWE ZVAKAITIKA 18H30. Ichokwadi chakaitika usiku hweChishanu 16 kusvika Chishanu 17 May.
Zvose izvi zvinokanganisa zvisati zvasimbiswa. Asi chimwe chinhu ndechechokwadi: doro reLe Marina, iyo Barcarès usiku-nguva yakasarudzwa inozivikanwa muDhipatimendi reAsia yose, yaiva pamwe chete nemhuka inopisa. Pakarepo akaudzwa pakati peusiku kubva musi weChishanu 16 kusvika Chishanu 17 May, nguva pfupi pasati yepfumbamwe mangwanani, vanenge makumi matatu vachipisa moto vakaenda kunzvimbo yekukunda dambudziko racho. Imba yezvokudya-bar-pool, iri pedo ne disco, Les Voiles Blanches, yakaparadzwa zvachose, uye moto wakapararira kumusango wepine wakakomberedza. Bhuku resiku rakaponeswa.
Mifananidzo yekuiswa mumoto usiku ihwohwo
Mukumuka kwacho, kuongororwa kwakavhurwa neGendarmerie brigade yaSaint-Laurent-de-la-Salanque vasati vasungwa kune mapurisa ePerpignan, uye vakatevera pasi. Maererano nemashoko edu, hutachiona hwechiito chacho hunofungidzirwa zvakanyanya.
Munguva pfupi, sampuli dzichatorwa nevanyanzvi ve SRPJ Montpellier uye kuongororwa kuchaitwa neBrozen Scientific Police yeTououse.
Iko Marina, iyo inopemberera gore rino makore e-35 okuvapo, yaiva yekutanga nguva yaro yechando ichi Mugovera 18 May. Zvisinei, kutevera chiitiko usiku hwekupedzisira, kuvhurwa kwekugadzwa kuchava Mugovera unozouya, we 25 May. Usiku huno, boka racho rinotaurirana pane zvemasangano evanhu: "Vatengi vedu vose vakange varonga kupinda" kuvhura "kwedu vanokokwa kuzosangana neMugovera uyu (May 18) kuLuna muCanet-en-Roussillon. Kubvuma kusununguka pamushumo wehuyu mharidzo. "
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lindependant.fr/2019/05/17/le-barcares-la-discotheque-le-marina-a-brule-dans-la-nuit-la-piste-criminelle-envisagee,8205774.php